मैले चाहेको सेक्सडलको कपाल मेरी पूर्वपत्नीको जस्तै सुन्दर र सुनौलो हुनुपर्छ !::नेपाली मनको डिजिटल पत्रिका
मैले चाहेको सेक्सडलको कपाल मेरी पूर्वपत्नीको जस्तै सुन्दर र सुनौलो हुनुपर्छ !
आइत, असार २९, २०७६
पूर्वपत्नीजस्तो सेक्स डलको चाहना- सम्बन्ध विच्छेदपछि एक जना ब्रिटिस नागरिकले पूर्वपत्नीलाई भुल्न सकेनन्। ती व्यक्तिले अनलाइन बजार ‘हस–हस’मा एउटा पत्र लेखे। उनको अनुरोध थियो– सेक्स डल उत्पादन गर्ने कम्पनीले उनको पूर्वपत्नीजस्तै देखिने यौन खेलौना बनाइदेओस्।
जसले प्रेमीको जिब्रो टोकेर भुइँमा थुकिदिइन्– सन् २०१७ मा एक जना स्पेनी महिलाले पूर्वप्रेमीलाई अत्यन्त क्रूर चुम्बन गरेकी थिइन्। पूर्वप्रेमीले सम्बन्ध टुंग्याउन खोजेको बताएपछि उनले ‘अन्तिम चुम्बन’ गर्ने बहानामा उनको जिब्रो टोकर भुइँमा थुकिदिएकी थिइन्। ती महिला अब कानुनी फन्दामा पर्ने भएकी छिन्।